कांग्रेसको दाबी- महिना दिनमा नेकपा... :: प्रशन्न पोखरेल :: Setopati
कांग्रेसको दाबी- महिना दिनमा नेकपा कार्यकर्तासहित ३१ हजार कांग्रेस बने जनताले सोधे- चुनाव छैन, किन गाउँ आउनुभो!
एक महिने राष्ट्रिय जागरण अभियान सकाएको पाँच दिनपछि नेपाली कांग्रेसले बिहीबार पत्रकार सम्मेलन गर्‍यो।
अभियानका क्रममा दुई हजार हाराहारीमा भेला, सभा तथा अन्तरक्रिया गरेर संगठनलाई क्रियाशील पारेको प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्माले बताए।
सबै जिल्लामा जागरण अभियान गर्न कांग्रेसले ७७ जना केन्द्रीय सदस्य खटाएको थियो। ती केन्द्रीय प्रतिनिधिको काम जिल्लामा कांग्रेसका गुटगत झगडा मिलाउनेदेखि संगठनलाई उर्जाशील बनाउने थियो।
यसपालि गाउँ पुगेका नेतालाई सर्वसाधरण र कार्यकर्ताले अहिले किन गाउँ आएको हो भनेर सोधेछन्।
‘कतिपयले चुनावै नभई किन गाउँ आउनुभएको हो भनेर सोधे। चुनाव छैन नेता झण्डा बोकेर किन गाउँ आए? मानिसहरूमा जिज्ञासा रह्यो,’ प्रवक्ता शर्माले भने।
कांग्रेसमात्र होइन, अरू राजनीतिक दलले पनि चुनावका बेला बाक्लो गरी सहरदेखि गाउँसम्म कार्यक्रम गर्छन्। तर चुनाव हारेको कांग्रेस यसपटक भने चुनावबिना नै गाउँ पुगेको देखेर मानिसहरूमा खुल्दुली बढ्नु स्वभाविक नै हो।
‘हामी प्राय: चुनावका बेलामात्रै गाउँ गयौं, त्यसैले यस्ता प्रश्न आएका हुन्,’ शर्माले भने, ‘कहिलेकाहीँ नेता एक्लै जानुभयो होला, सांसद, मन्त्री आकलझुकल जानुभयो होला। तर यसपटक अभियान नै चलाएर देशैभर एकैसाथ पार्टी सुगमदेखि दुर्गमसम्म पुग्यो।’
जागरण अभियानको समीक्षा पनि गरेकोले प्रवक्ता शर्मालाई पत्रकारले एकपछि अर्को प्रश्न सोधे।
जागरण अभियान केन्द्रका नेतालाई चाहिएको छ गाउँका कार्यकर्तालाई होइन भन्ने छ नि! भन्ने प्रश्नमा शर्माले कमजोरी पहिचान गरिएकोले अब संगठनलाई थप सुदृढ गरेर लैजान सघाउने बताए।
‘पार्टीभित्र कमजोरी छैन भन्ने होइन अवश्य छ। कमजोरीलाई कार्पेटमूनि छोपेर सुगन्धित बनाउने काम गरिन्न, कमजोरी आत्मसाथ गरेर गल्ती छन् भने सच्याएर अघि बढ्न जागरण अभियानले उर्जा दिएको छ,’ उनले भने।
शर्माले जवाफ दिन नभ्याउँदै अर्को प्रश्नको सामना गरे। जागरण अभियानले पार्टीलाई भन्दा गुटलाई जागृत गरायो भन्ने रहेछ नि के भन्नुहुन्छ? शर्माले भने, ‘हेर्नुहोस्, जागरण अभियानअघि नेताहरू एक्लैएक्लै हिँड्नुहुन्थ्यो होला। तर जागरणले नेता र कार्यकर्तालाई सँगसँगै दौडायो।’
पार्टीमा सल्लाह नगरी जागरण अभियान ल्याएको बरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलको अभिव्यक्ति र १४ औं महाधिवेशन घर्काउन अभियान गरेको केन्द्रीय सदस्य शेखर कोइरालाले पार्टीकै कार्यक्रममा बताउने गरेका छन्।
जागरणबारे त पार्टीभित्रै विवाद रहेछ किन? भन्ने प्रश्नमा प्रवक्ता शर्माले भने, ‘जागरण अभियान गलत भयो भन्नेहरूले पनि घरमा सुतेर बस्नुभएन। दुर्गम पुगेर जागरणकै कार्यक्रममा भन्नुभएको छ। यसैले विवाद होइन जागरणले सबैलाई परिचालित गरायो, उर्जा दियो।’
शर्माले असार १४ गते अघि केन्द्रीय प्रतिनिधि र पार्टीका नेताबीच स्थानीय तहमा सुनेका गुनासाबारे छलफल गर्ने कार्यक्रम रहेको सुनाए।
‘जनताले कांग्रेसलाई के भने जस्ताको त्यस्तै प्रतिनिधिले भन्नुपर्छ, प्रतिवेदन बुझाएर मात्रै सुख पाउनुहुन्न,’ उनले भने, ‘पार्टी र सरकारबारे त्यसबाट पनि केही कुरा आउँछ।’
उनले भदौमा दोस्रो चरणको अभियान सुरू गर्नुपूर्व पार्टीभित्रका सबै विभाग पूर्णता दिने, नेपाल विद्यार्थी संघको तदर्थ समिति बनाउने र तरुण दललाई पनि पूर्णता दिइने दाबी गरे।
साथै उनले प्रतिपक्षमा रहेको कांग्रेसमा आकर्षण र सरकारप्रति जनताको विकर्षण रहेको बताए।
‘एक महिनामा देशैभरबाट ३१ हजार ५ सय ४२ जना साथीहरु पार्टी प्रवेश गरे,’ उनले दाबी गर्दै भने, ‘उनीहरूमध्ये दुई तिहाइ सत्तारूढ नेकपाका कार्यकर्ता थिए। प्रशिक्षण दिएर मात्रै पार्टीले उनीहरूलाई जिम्मेवारी दिन्छ।’
प्रकाशित मिति: बिहिबार, जेठ ३०, २०७६, १६:२४:००